खोकीले हैरान बनायो ? अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय | Samajik Khabar
Home अन्य खोकीले हैरान बनायो ? अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
ज्वानो :चार चम्चा जैतूनको तेल तीनचार अलिकति ज्वानो हालेर हलुका तताउनुस् । तेल मनतातो पारेर राति सुत्नुअघि छातीको मालिश गर्नुस् ।
केसर: लहरेखोकी ठीक पार्नका लागि केसर अचूक औषधि हो । यसमा भएको एन्टीब्याक्टेरियल तत्त्वले संक्रमण रोक्नुका साथै रुघाबाट पनि मुक्ति दिन्छ । केसरको स्टिग्मामा आधा कप पानी हालेर घोल्नुस् । यो घोललाई दिनदिनै सेवन गर्नुस्।
Previous articleदेउवालाई सभापतिमा आफुले मात्रै हराउन सक्ने शशांक कोइरालाको दाबी
Next articleसार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिचेर हतारहतार ७२ लाख रुपैयाँमा बनाइएको आइसोलेसन १ महिनामै चुहियो